PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2018-11-18 - Isililo izigebengu ziphahlaza ibhanoyi
Isililo izigebengu ziphahlaza ibhanoyi
Isolezwe ngeSonto - 2018-11-18 - IZINDABA - KHETHA SANGWENI
ZIKHALE zemuka noR600 000 izigebengu ezibaleke ngomncanyana wemoto engenajubane, iChevrolet Spark, ngemuva kokubamba inkunzi indawo obekuqhutshwa kuyo ‘ibhanoyi’ iWall Street Social Club, oLundi, ngoLwesine ekuseni.
Umthombo uthi le ndawo ngeyomunye umlisa waseNquthu obewaka abantu ukuba bafake imali yabo ebathembisa izigidi. Kuthiwa abantu bebengena ngobuningi babo usuku nosuku bethenjiswa ukuthi bazoba yizinjinga uma bethulula imali yabo kulo mlisa.
Umthombo uthi kufike abalisa abane abebehlomile balalisa phansi kwasani nabebezolanda imali ababeyifake kuleli bhanoyi.
Kuthiwa abaqaphi nabasebenzi balalisiwe kwafunwa imali ngodli, yafakwa esikhwameni somunye wabasebenzi.
Kuze kwathathwa namaselula abo abebekhona kwamali ebilethwe amanye amakhasimende ithathiwe.
Kuthiwa laba bantu abebethatha imali bebevula yonke indawo kubukeka sengathi bayazi kahle ukuthi ikhona imfumba yemali kuleli hhovisi. Kuvela ukuthi kuqhume isililo kubantu abebefake izimali zabo belinde ukubuyelwa yizishaqane sebezwa kuthiwa ishaqwe yonke imali basala bencela izithupha.
Kuthiwa okunye okuxakayo ukuthi kunamakhamera kulesi sakhiwo kodwa ngosuku lwesigameko abecinyiwe okuthiwa kwenziwa umnikazi webhanoyi. Kutholakale amaselula elahlwe emgwaqweni nokusolakala ukuthi alahlwe yizo izigebengu.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uLiutenant Colonel Thulani Zwane, ukuqinisekisile ukuthi kuphenywa icala lokuphanga.
Uthe kuthathwe imali engadalulwanga, amaphoyisa asoLundi ayaqhubeka nophenyo abengakabophi muntu ngalolu daba.